Maxay tahay cabsida ay Iiraan ka qabto heshiiska Imaaraadka iyo Israa’iil? | Gaaroodi News
Maxay tahay cabsida ay Iiraan ka qabto heshiiska Imaaraadka iyo Israa’iil?
August 24, 2020 | Published by: Tifaaftiraha
Shacabka Iiraan oo ku hor mudaharaadaya safaaradda Imaaraadka ee Tehran
Tani iyo markii lagu dhawaaqay heshiiska dib u soo celinta xiriirka ka dhaxeeya Israa’il iyo Imaaraadka oo uu Madaxweyne Trump ka dhawaajiyey Khamiistii oo ay ku beegneed 13-ka Agoosto, Iiraan ayaa heshiiskaasi si kulul ugu falcelisay iyada oo hanjabaado culusna ka soo saartay.
Falcelinta ay Iiraan heshiiskaasi ka bixisay ayaa markale soo noqotay, iyada oo Taliya ku xigeenka guud ee ciidammada ilaalada qaranka ee Iiraan general Cali Fadawi uu sheegay in israa’iil loo furo alaabbabadii gobolka ee ka xirnaa, iyada oo loo marayo waddamada qaarkood.
Wuxuuna taliya ku xigeenku ka digay waddamada gobolka ku yaalla ee heshiisyada la galaya Israa’iil iney cawaaqib xumo la kulmayaan, walow uu magacaabin waddamadaasi uu digniinta u dirayo waxa ay yihiin.
Fadawi ayaa sheegay “tallaabba kasta oo la iskudayayo in xiriir lagula sameysto Israa’iil si awoodda saxnuuniyadda in gobolka lagu sii xoojiyo ay guul-darro iyo sharaf dhac ku keeni doonto waddamada iskaashiga lal leh Israa’iil”.
Wuxuuna taliyaha ku nuuxnuusaday waddamadaasi “iney ka badbaadi doonin cawaaqib xumada ka dhalata arrintaasi, arrintaasina ay horistaagi doonin qaddiyadda Falastiin.”
Hadalkan ka soo yeeray taliye ku xigeenka ciidamada kacaanka Iiraan ayaa noqonaya falcelinta ugu dambeysay uguna xoogganeyd oo looga falceliyo heshiiska Imraadka iyo Israa’iil dhexmaray.
Taliyaha guud ee ciidamada Iiraan Darreeya Guud Maxammed Bagheri 16-ka bisha Agoosto wuxuu sheegay “Iiraan qaabka ay ula dhaqmeyso Imaaraadka uu isbeddelayo, haddii ay dhacdo tallaabbo wax u dhimeyso amniga qaranka oo uu ku dhaqaaqo dal Khaliijka ku yaalla.”
Dadka falanqeeya siyaasadda Iiraan oo warbaahinta dalka iiraan ka hadlay waxay sheegeen walaaca amni ee ugu weyn ee ay Iiraan ka qabto heshiiska Imraadka iyo Israa’iil iney tahay Israa;iil oo qayb ka noqoto rugta ganacsiga Dubai ay fursad u siineyso iney arrimaha Iiraan dabagalaka ay ku hayso iney sii labajibbaarto.
Wargeyska New York Times oo wax ka qoray heshiiska dhexmaray Israa’iil iyo Imaaraadka ee ay ku soo celinayaan xiriirkooda inuu sidiisi hore ku soo noqdo ay muddo qaadaneyso.
Wargeyska oo soo xiganaya Sanam Wakil oo ah cilmibaare ka tirsan Chatham House oo ku yaalla magaalada London wuxuu sheegay “Imaaraadka ma taageeri doonaa weerarrada ay Israa’iil ku qaaddo xaruumaha Iiraan ee Suuriya ku yaalla ama tallaabbooyinka lagu wiiqayo awoodda Xizbullah?” arrimahaasi oo dhan ayaa hadda u mquuqda kuwa mugdi uu ku jiro.
Balse waxaa arrintaa jawaab ka bixiyey xafiiska Ra’isal wasaaraha Israa’iil Banjamin Netanyahu, wuxuuna sheegay inuusan jirin isbaddal ku yimid mowqifkii Israa’iil ee ahaa hubka casriga ah iney ka iibiso waddan ku yaalla bariga dhexe, taasoo dammaanad qaadeysa awoodda ciidamada israa’iil.
Wixi hadda ka dambeeya labada dal waxaa u billowday xiriir dhinaca taleefannada tooska ah
Iisutagga Imaaraadka wuxuu marar badan diiday heshiiskan uu Israa’iil la galay in lagu bartilmaameedsanayo Iiraan, ama khatar xagga amniga ah.
Wasiirka arrimaha dibadda Imaaraadka Anwar Gargash wuxuu bartiisa Tweetar-ka uu ku qoray heshiiska Iisutagga Imaaraadka Carabta iyo Israa’iil dhex maray inuu yahay heshiis geesinnimo leh.
Balse wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ayaa sheegtay madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani uu Imaaraadka uga digay iney Israa’iil u oggolaato iney gobolka saldhig ciidan ka sameysto, isaga oo sheegay wax weliba iney xad ay leeyihiin.
Wakaaladda wararka ee Emirate “WAM” oo soo xigatay agaasimaha waaxda iskaashiga caalamiga ee wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraadka waxay sheegtay Isaraa’iil iyo Imaaraadka iney kala saxiixdeen heshiis iskaashi oo dhinaca amniga gudaha.
Heshiiska nabadeed ee ay labada dal yeesheenna waxaa lagu sheegay in looga gol leeyahay in la dhiso xiriir dhaqaale iyo id cilmiga teknooloojiyadda, caafimaadka, waxbarashad iwm.